Seho vaovao amin'ny ho avy iPad Air 5, iPad Mini 6 ary iPad 9 no voasivana | Vaovao IPhone
Fampivoarana vaovao mivoaka amin'ny ho avy iPad Air 5, iPad Mini 6, ary iPad 9
Angel Gonzalez | 29/07/2021 16:00 | iPad, About us
Ny tsingerin'ny famelabelarana izay nananan'i Apple nandritra ny tantarany dia nisy fiatraikany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Hatramin'ny tsy ela izay, volana septambra ny volana iPhone raha volana Oktobra kosa ny volana Oktobra. Na inona na inona volana fampisehoana dia inona no mazava Apple dia miasa amin'ny fanavaozana ny iPads isan-karazany anisan'ireny ny iPad Air 5, iPad Mini 6, ary iPad faha-9. Raha ny marina, mpivarotra sinoa iray dia nampiharihary ny sasany amin'ireo fiasa izay mety ampidirin'ny tsirairay amin'ireo fitaovana ireo amin'ny farany.
Mety ho ny iPad Air 5, iPad Mini 6 ary iPad 9 vaovao ity
Ny fampahalalana dia avy amina media japoney fanta-daza, MacOtakara, izay nahazo famoahana lehibe avy amin'ny mpamatsy sinoa fantatry ny tontolon'ny teknolojia. Noho ny fivoahana dia afaka manamarina isika, miaraka amin'ireo tsaho hafa teo aloha, izany Apple dia miasa amin'ny fanavaozana ny iPad Air, iPad Mini ary iPad hatramin'ny taranany manaraka.
Ny taranaka manaraka an'ny iPad Mini dia haneho fampisehoana Mini-LED
Raha ny angom-baovao nomena, iPad Air 5 Izy io dia hanasongadina endrika mitovy amin'ilay iPad Pro 11-santimetatra fahatelo. Izany hoe, afaka miditra sahady amin'ny 11 santimetatra isika ankoatr'izay ampidiro ny rafitra fakan-tsary roa: zoro malalaka sy zoro ultra malalaka. Mikasika ny puce izay hampidiriny dia izy no A15 Bionic puce, ny rahalahin'ny A15 izay hitondra ny iPhone 13. Ny chip dia hifanaraka amin'ny 5G mmWave. Ary farany, afaka nampiditra iPad Air 5 mpandahateny efatra.
Mitohy miaraka aminy ny tsaho IPad faha-9, ny maodely fototra indrindra amin'ny takelaka ampiasain'ny Apple. Tsy misy zava-baovao lehibe tafiditra ao amin'ity fitaovana ity mandritra ny taona maro. Apple mety te tazomy ny famolavolana hatramin'ny 2022 na mihoatra, ary ny tanjona dia ny hanome iPad mora vidy sy mahery.
Farany, ny IPad Mini andiany faha-6 Hanana efijery 8,4-inch, misy puce A14 Bionic, izay entin'ny iPad Air amin'izao fotoana izao. Amin'ny ambaratonga famolavolana, mitovy ny mitranga amin'ny iPad tany am-boalohany, tsy hisy fiovana raha tsy aorian'ny 2022.
Misy ihany koa ny mety hoe ny iPad rehetra noresahina hatreto dia ampidirina a Scanner LiDAR. Saingy nolavin'izy ireo izany fahafaha-manao izany, amin'ny filazan'izy ireo fa ny Apple dia mampiditra azy ao amin'ireo vokatra izay ao anatin'ny faritra misy ny 'Pro', na amin'ny iPhones na iPads.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fampivoarana vaovao mivoaka amin'ny ho avy iPad Air 5, iPad Mini 6, ary iPad 9
Ny Bang & Olufsen Beoplay EQ vaovao dia eo an-tampon'ny AirPods Pro
Ny beta vaovao an'ny iPadOS 15 dia mampifangaro endrika mitovy amin'ny Safari an'ny macOS Monterey